10 Dariiqo oo nadiifi Faylal ay qashinka ka iPhone
Ma sii Nadiifinta files junk ka iPhone waa gumaarka ah. Si fudud Waxaad ka heli kartaa tan waxan samaysay iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah nidaamyada hoos ku siiyo:
Qeybta 1: Xalka 01 - Guuleysatey
Qeybta 2: Xalka 02 - Close furay Apps
Qeybta 3: Xalka 03 - Clear History iyo Website Data (ka Settings)
Qeybta 4: Xalka 04 - Clear History iyo Website Data (ka Safari)
Qeybta 5: Solution 05 - saar Apps
Qeybta 6: Xalka 06 - Dib u celi iPhone
Part 7: Xalka 07 - Faylal ay qashinka ah oo cad cad oo la PhoneClean
Qaybta 8: Xalka 08 - Faylal ay qashinka ah oo cad iyo Apps aan la isticmaalin Wondershare SafeEraser
Qaybta 9: Xalka 09 - Faylal ay qashinka ah oo cad cad oo la BatteryDoctor
Part 10: Xalka 10 - Clear RAM la Battery Doctor
Xalka 01 - Guuleysatey
Marar badan qeybtii labaad fudud hagaajinaysaa waxqabadka aad iPhone sida ay xirtey xarunteedii oo dhan barnaamijyadooda furay oo Fayda faylasha ku meel gaar ah iyo xogta junk ka xasuusta si toos ah. Si aad uga bilowdo aad iPhone:
Press Long hurdada / button Wake ku saabsan iPhone.
Marka slide in tamarta off fariin u muuqataa shaashadda, tuubada iyo jiidi badhanka Power bandhigay iyo bidix.
Sug ilaa iPhone awoodaha aad off gabi ahaanba.
Marka sameeyo, sug 10 seconds kale oo saxaafadeed dheer button hurdada / Wake ilaa logo Apple u muuqataa shaashadda.
Xalka 02 - Apps Close furay
Ka dib markii aad isticmaashay aad iPhone labo maalmood oo aad bilowdo kulma ay qaab hoos u, waxaad la xiro karo oo dhan barnaamijyadooda furay aan howleheedii telefoonka. Markii ay barnaamijyadooda furay xiran yihiin, dhan u dhiganta files ay ku meel gaar ah ayaa la helay laga masaxayo xusuusta iyo sidoo. Si aad u xirto oo dhan barnaamijyadooda furay;
1. Laga soo bilaabo screen Home aad iPhone, double-saxaafadeed button Home ah.
2. Marka thumbnails oo dhan barnaamijyadooda furay waxaa lagu soo bandhigaa, tuubada iyo jiidi thumbnail kasta kor in ay xirto app u dhigma.
3. Ku celi talaabo 2 kasta thumbnail soo bandhigay ilaa aad ka hadhay oo keliya mid ka mid ah wakiil ka screen Home ah. (Tani waxay la mid aan la dhaqaajin karin.)
4. Riix badhanka Home mar kale inuu dib ugu aragtida caadiga ah aad u hesho iyo bilaabin isticmaalka aad iPhone sida caadiga ah.
Xalka 03 - Clear History iyo Website Data (ka Settings)
Inta jeer ee ay cookies iyo taariikhda websites idin soo booqday baabbi'iyee qadar badan oo ah meel aad iPhone ee kaydinta. Soo saarida macluumaad sida la yaabka lahaa hagaajinaysaa wax qabadka guud ee qalabka. Si aad xogta taariikhda iyo website ka furmo suuqa Settings ah:
1. Laga soo bilaabo screen Home ah, tuubada Settings icon.
2. Meel ku tuubada Safari app ka Settings uu furmo suuqa.
3. Laga soo Safari uu furmo suuqa, oo ka soo hoos ASTURNAANTA & SECURITY qaybta, ka jaftaa Clear History iyo Website Data .
4. Laga soo box xaqiijinta in booda ah, ka jaftaa Clear History iyo Data .
Fiiro gaar ah: Habkani waa kuwa ugu waxtarka badan marka aad isticmaasho cid saddexaad daalacashada internetka sida Opera, Chrome, iwm oo ay la socdaan Safari oo ah browser default in iPhone ka.
Xalka 04 - Clear History iyo Website Data (ka Safari)
Haddii aad isticmaasho oo kaliya Safari u eegay web on your iPhone, waxa kale oo aad karto xogta taariikhda iyo website ka gudahood browser web laftiisa. Si aad xogta taariikhda iyo website ka Safari ee:
1. Laga soo bilaabo screen Home aad iPhone, tuubada Safari icon in la furo browser internetka.
2. Laga hoose ee Safari furay ee interface, ka jaftaa icon bookmark ah (wakiil astaanta buug furay).
3. Laga soo Bookmarks uu furmo suuqa, ka jaftaa History ka mid ah liiska soo bandhigay.
4. Oo salka uu ah History uu furmo suuqa, ka jaftaa oo cad cad.
5. Marka taariikhda Clear sanduuqa xaqiijin muuqataa, ka jaftaa Clear All History si aad u nadiifiso dhammaan faylasha junk ururiyay in aad telefoonka.
Xalka 05 - saar Apps
Marar badan ay barnaamijyadooda ku rakiban abuuro ama ururiyaan xogta junk naftooda ka yimid midkood halka in isticmaalka internetka. Tan iyo Apple ma ogola in aad si madax bannaan uga saarto xogta sida haddii aad ka iPhone isticmaali ah app dhinac saddexaad, tirka app mujrim wadajir sidoo saaraysaa oo dhan files junk. Waxaad dib karaa app ka dib, taas oo ay ka saareen, inkastoo resets oo dhan la door caado aad dib ugu default, Daahiriyo xusuusta iyo hagaajinaysaa-qabadka guud ee aad telefoon iyadoo wax dhibaato ah. Si aad u soo saarto app ah ka iPhone:
1. Laga soo bilaabo screen Home ah, tuubada Settings .
2. Laga soo Settings interface, hel iyo tubbada Guud doorasho.
3. Marka guud ee suuqa kala kor u furmay, hel oo ka jaftaa Isticmaalka .
4. Oo salka uu ah Isticmaalka suuqa kala, tuubada Maamul Kaydinta .
5. Marka uu ku Kaydinta uu furmo suuqa, ka mid ah liiska soo bandhigay ee Chine lagu rakibay, ka jaftaa mid ka mid ah la isticmaalka xogta ugu badan (ama mid ka mid ah aad is leedahay waa sababta keentay in qaab daalid aad iPhone). ( Rasuulkiisa waxaa soo gaaray mudaaharaad halkan.)
6. Laga bilaabo interface app ee, tuubada Delete App .
7. Marka sanduuqa xaqiijinta kor u yimaado, tuubada Delete App .
Xalka 06 - Dib u celi iPhone
Haddii aad la soo ciyaaray ee aad iPhone dheer iyo barnaamijyadooda ku rakiban soo ururiyay qadar badan oo ah 'haraaga burburka', resetting telefoonka dib ugu default noqon lahaa bet ugu wanaagsan. Si aad u damiyo iPhone in ay ka saarto xogta junk oo dhan:
2. Laga soo Settings uu furmo suuqa, ka jaftaa Guud .
3. Laga bilaabo hoose ee soo bandhigay General uu furmo suuqa, tuubada celi.
4. Marka Warbixannada suuqa kala soo, ka jaftaa masixi All Content iyo Settings .
5. Laga soo box xaqiijinta in booda ah, ka jaftaa masixi iPhone .
Xalka 07 - Faylal ay qashinka ah oo cad cad oo la PhoneClean
PhoneClean waa app dhinac saddexaad ah si aad u nadiifiso files junk ka iPhone. Si aad u nadiifiso xogta la rabin ka iPhone isticmaalaya PhoneClean:
Download PhoneClean ka http://www.imobie.com/phoneclean/ URL.
Ka dib markii ay soo degsado, dajiyo barnaamij ku saabsan Windows ama Mac PC.
Burcad PhoneClean by double-gujinaya ay icon.
Laga soo bilaabo interface furay, guji Quick nadiifi.
Laga soo bilaabo suuqa kala socda, dooro nooca faylasha ama data in aad rabto in aad si aad u nadiifiso.
Guji Start Scan oo raaca on-screen tilmaamaha halkaas uga iskaan iyo saarto faylasha junk ka iPhone.
Xalka 08 - Faylal ay qashinka ah oo cad oo aan la isticmaalin Apps la Wondershare SafeEraser
Haddana mid kale oo laga yaabaa in qalab ugu hufan ee suuqa kala cadeeyo Xogta junk iyo barnaamijyadooda la isticmaalin ka iPhone. Si aad files junk iyo barnaamijyadooda kale aan la isticmaalin ka iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser :
1. Download Wondershare SafeEraser hoose ee Windows ama Mac siday u kala horreeyaan.
2. Sida madal nidaamka qalliinka lagu rakibay aad kombuutarka per, rakibi SafeEraser Wondershare ku on your computer iyadoo la isticmaalayo habka loo xirxiro si joogto ah.
3. Daahfurka Wondershare SafeEraser by double-gujinaya ay icon.
4. interface ugu horeysay, markii ay keentay in, xiriiriyaan iPhone in aad PC isticmaalaya cable xogta USB u yimid ay la socdaan waxaa la.
5. Sug inta wadayaasha ah looga baahan yahay telefoonka ku xiran waxa loo xiraa.
6. Marka sameeyo, ka fursadaha soo bandhigay, riix Nadiifinta 1-Click doorasho (button la calaamad Gaetano a).
7. Sug inta baaritaano SafeEraser Wondershare for files ee log, files khasnado synch, video iyo files log audio, iyo barnaamijyadooda la isticmaalin aad iPhone.
8. Marka files waxaa laga helaa, jeeg ama uncheck checkboxes matalaya noocyada file in aad rabto in aad ka saarto ama aad u kala horreeyaan ka.
9. Ugu dambeyntii riix nadiifinta button ka hooseysa in ay ka saarto faylasha loo baahneyn ka iPhone.
10. Sug inta waxyaalaha xushay laga saaro iPhone.
Xalka 09 - Faylal ay qashinka ah oo cad cad oo la BatteryDoctor
Battery Doctor waa app oo lacag la'aan ah in ay nadiifiso files junk ka iPhone. Si aad u tayadoodii aad iPhone isticmaalaya Battery Doctor:
Battery Doctor 1. Download ka https://itunes.apple.com/us/app/battery-doctor-must-have-battery/id615987910 link.
2. Ku rakib barnaamijka aad iPhone.
3. Daahfurka Battery Doctor by siyoodba ay icon ka screen Home ah.
4. Marka, aqbalo heshiis liisanka.
5. Marka sameeyo, ka hoose ee interface furay weyn ee app, tuubada qashinka doorasho.
6. Laga soo qashinka ah uu furmo suuqa, tuubada khasnado nadiifinta button.
7. Marka Digniin sanduuqa soo booda, ka jaftaa nadiifi .
8. Sug ilaa files junk waxaa la marsiiyey iyo saaro iPhone.
Xalka 10 - RAM Clear la Battery Doctor
Waxa intaa dheer in nadiifinta files junk ka iPhone, Battery Doctor sidoo kale Sarre xusuusta aad telefoonka ee. In sidaa la yeelo,
1. Raac tallaabooyinka 1 ilaa 4 tilmaamay in xalka 06 si ay u soo bixi, rakibi, abuurtaan Battery Doctor, iyo aqbalo heshiis liisanka.
2. Laga hoose ee interface furay, tuubada Memory doorasho.
3. On the Memory Yididiilo uu furmo suuqa, sug ilaa iyo inta uu baaritaanku Battery Doctor xusuusta iyo muuqataa wixii macluumaad ah ee aan la rabin in laga saari karo aad iPhone.
4. Marka app ku dhamaystiri iskaanka ah, tuubada kor loogu qaado .
5. Sug inta Battery Doctor Sarre xasuusta telefoonka ee la fogeynayo faylasha ku meel gaar ah iyo macluumaad kale oo qashinka ka iPhone.
6. Marka nidaamka dhameystiray, tuubada qabtay .
Nadiifinta ilaa xusuusta aad iPhone ee nadiifinta files junk iyo kale "qashinka burburka 'aan la rabin waxaa muhiim ah. Waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah hababka kor ku xusan in ay tayadoodii aad iPhone iyo in la isticmaalo telefoonka si hufan.
10 Waa-Have iPhone Nadiifinta Apps
Sida loo Cad History ka Android Phones
Sida loo Cad Kukiyada on iPhone
Sidee ayaad u Clear All Data ka iPhone ah
Sida loo Cad Space on Your iPhone
Sida loo Cad History on iPhone
Sidee oo bilaash ah ilaa Space More on macruufka Your 9 Device
Jidka Easy The - Xogta laga Phones Android iyo murriyado la baneeyo
Sidee ayaad u Cache cad cad ee Android Qalabka?
> Resource > Clean-up > 10 Dariiqo oo nadiifi Faylal ay qashinka ka iPhone